रास्ट्रिय समाचार Archives - Enepal Serofero
Posted in रास्ट्रिय समाचार
एजेन्सी |संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिकागोस्थित एक अस्पतालमा अन्धाधुन्ध गाेली चलेकाे छ । साे गोलीकाण्डमा ४ जनाको ज्यान गएको जनाइएकाे छ । ज्यान गुमाउनेमा अस्पतालका दुई महिला कर्मचारी, एक प्रहरी अधिकारी र स्वयम्‌ बन्दुकधारी छन् । जसमध्ये १ जना साेही अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक समेत रहेकाे बताइएकाे छ । स्थानीय समयअनुसार साेमबार ३ बजेतिर शिकागोको मर्सी अस्पतालमा गोली चलेकाे हाे । गोली हानाहानका क्रममा बन्दुकधारी मारिएको प्रहरीका प्रवक्ताले बताए पनि बन्दुकधारीले नै आफैँले आफ्नो ज्यान लिएकाे वा नलिएको चाहिँ प्रस्ट हुन नसकेको बिबिसीले जनाएकाे छ । तर नाम नखुलेका ती गनम्यानले ३ जनाको हत्यापछि आफैंलाई गोली हानेको सिकागोका मेयर रहम इमानुयलले पुष्टि गरेकाे समाचार एजेन्सीहरुबाट खुल्न अाएकाे छ । मारिएका महिलामध्ये एक जनासँग गोली चलाउने व्यक्तिको सम्बन्ध रहेको र बन्दुकधारीले ती महिलालाई लक
चीन मेरा लागि विद्यार्थीकालदेखि नै विशिष्ट आकर्षणको मुलुक थियो, एउटा स्वप्नदेशजस्तो । राजनीतिमा माओ–त्से–तुङ अथवा साहित्यमा लु–सुनजस्ता नामहरूले सधैं तानिरहन्थे । चीनको आकर्षणमा तानिएर माओ विचारमाथि एउटा सानो पुस्तिका लेखिसकेको थिएँ । अलिक पछि म स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा भएको अल्मा–आटा घोषणा (सन् १९७८) का कारण पनि चीन बढी सरोकारको देश बन्यो । अल्मा–आटा कन्फरेन्सपछि सबैका लागि स्वास्थ्य अभियान चीनले ग्रामीण क्षेत्रमा सक्दो डाक्टर पठाउने एकदमै प्रभावकारी रूपले अघि बढाएको थियो । धेरै पछि सन् २०१२ मा चीनमा राजदूत बन्ने संयोग पर्‍यो । त्यसै साल १८ औं पार्टी कंग्रेसबाट सी जिन फिङ राष्ट्रपति बन्नुभयो । सीको नेतृत्वमा चीनले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक हैसियत विश्व मानचित्रमा बढाइरहेको सन्दर्भमा उसको ‘पिसफुल राइज’ लाई नजिकबाट नियाल्न पाएको यो अवसर मेरा लागि साँच्चिकै विश
काठमाडौंः अमेरिकाले नेपाली सेनाका लागि अनुदानमा ४ वटा स्काई ट्रक (कार्गो जहाज) सहयोग गर्ने भएको छ । हवाई क्षमता विस्तारका लागि नेपाली सेनाले राखेको प्रस्ताव स्वीकार्दै यूएस आर्मीको ‘इन्डो प्यासिफिक कमान्ड’ मार्फत अमेरिकाले ४ वटा ‘फिक्स विङ’ स्काई ट्रक अनुदान सहायतास्वरूप उपलब्ध गर्न लागेको हो । यी जहाज अमेरिकाबाट छिट्टै नेपाल आउने सेनाले जनाएको छ । अमेरिकाले दिन लागेको चारवटै स्काई ट्रकको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सैनिक अधिकारीले जनाएका छन् । अमेरिकाबाट भित्रिन लागेका स्काई ट्रकको मूल्य प्रतिगोटा ६ देखि ८ मिलियन अमेरिकी डलर पर्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते सत्ता हातमा लिएसँगै अमेरिकाले नेपाललाई उपलव्ध गराउँदै आएको सैन्य सहायता रोकेको थियो । २०५८ अघिसम्म अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहायता पछिल्लो १५ वर्षमा रोकिए पनि पुनः सुचारु ह
बुटवल-गड्डाचौकी रेलमार्गको डीपीआर मस्यौदा बन्यो
२२ साउन, काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तरत बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म पश्चिम खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मस्यौदा तयार भएको छ । चार खण्डमा विभागजन गरेर दुई चिनियाँ कम्पनीले तयार गरेको डीपीआरको मस्यौदा रेल विभागमा आइपुगेको छ । विभागले आवश्यक अध्ययन गरेर यसलाई स्वीकृत गरेपछि डीपीआर फाइनल प्रतिवेदन हुने महानिर्देशक अनन्त आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । पूर्वी नेपालमा झण्डै ३० किलोमिटर खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहँदा बुटवलबाट गड्डाचौकीसम्मको रेल्वे खण्डको डीपीआर निर्माणको लागि अध्ययन सकिएको हो । ४२१ किलोमिटरको बुटवल-लमही, लमही-कोहलपुर, कोहलपुर-सुक्खड, सुक्खड-गड्डाचौकी खण्डको प्रतिवेदन आएको हो । पश्चिम खण्डको डीपीआर निर्माणको क्रममा पश्चिम खण्डका केही नदीहरुमा बलियो पुलसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । कैलालीको शिवगंगा
फाइल तस्वीर २० साउन, काठमाडौं । शनिबार दिउँसो झमझम पानी परिरहँदा केही मानिसले बानेश्वरमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न व्यस्त थिए । उनीहरु साना ठूलो खाल्डाखुल्डी एकएक पुरिरहेका थिए । झरिका बीचमा पनि काम गरेको देख्नेहरुलाई लाग्यो, ढिलै भएपनि सरकारले जनतालाई परेको पीर मर्का बुझ्न थालेछ ।’ नयाँ बानेश्वरमा मात्र होइन, आजभोलि मूल सडकहरुमा जतातातै काम भइरहेको छ । नगरुन पनि किन ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ आफैं बेला-बेलामा सडक अनुगमनमा निस्कने गरेका छन् र जुन सुकै हालतमा होस्, भदौ १२ गतेसम्म सबै सडकको खाल्डा पुर्नु परेर निर्देशन दिएका छन् । मध्य वर्षामै सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न थालिएछ नि भन्ने प्रश्नमा सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विदेशी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरु आउँदैछन् भन्ने थाहा छैन ?’ हो, भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयो
चीनले भारतलाई यसरी पछार्यो ! नेपाललाई फाइदै फाइदा
काठमाडौं: नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा दशकौंदेखि भारतीयको एकछत्र लगानी रहे पनि पछिल्ला वर्षहरुमा भने चिनियाँ लगानीले भारतलाई निकै पछाडि धकेलेको छ । उद्योग विभागका अनुसार गत २ आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने चिनियाँ लगानी भारतीयको भन्दा साढे ७ गुणाले बढी छ । चीनबाट ५८ अर्बभन्दा बढी लगानी भित्रिँदा भारतबाट भने ७ अर्बमा सीमित छ । चीनको मेनल्याण्डबाट ५५ अर्ब ८ करोड र चीनकै हङकङबाट ३ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भन् भारतबाट ७ अर्ब ८ करोड लगानी भित्रिएको छ । विभागका अनुसार चीन र भारतपछि सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट ३ अर्ब १ करोड, दक्षिण कोरियाबाट २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बरावरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चीनबाट सिमेन्ट, खानी उत्खनन, होटल, रेष्टुरेन्ट, ऊर्जा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढी भित्रिएको छ । हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सहमति
१३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानून बनाउन माग गरेको छ । आइतबार संसदको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस नेतृ उमा रेग्मीले भारत र अमेरिकामा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । कञ्चनपुरको भिमदत्तनगरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको प्रसंग उठाउँदै रेग्मीले भनिन्, ‘७७ वर्षीया वृद्धादेखि साढे दुई वर्षीया बालिकासम्म श्रृंखलावद्ध बलात्कृत भइरहेका छन् । यसै सिलसिलामा निर्मला पन्तको बलात्कार भएको छ । कानुन संशोधन गरेर मृत्युदण्डकोसम्म कारवाही गर्नुपर्छ बलात्कारीलाई ।’ उनले सरकारले बलात्कारीलाई खोजेर कारवाही गर्नुको साटो स्थानीय जनतालाई कारवाही गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन् । उनले लासको राजनीति गर्न खोजेको भनेर कांग्रेसलाई लागेको आरोपको खण्डनसमेत गरिन्
अमेरिकाले नेपाललाई भन्यो : खुला सीमानाका कारण नेपालमा आतंककारी चलखेल र घुसपैठ हुनसक्छ भन्दै सरकारलाई चनाखो हुन् गार्हो आग्रह
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग आज अपराह्न नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइन बी टेप्लिजले रक्षा मन्त्रालयमा आज बिदाइ भेट गरी खुला सीमा भएकाले आतंककारीले चलखेल गर्ने र घुसपैठ गर्ने बढी सम्भावना भएको तर्फ चनाखो रहन सुझाव दिनुभएको छ । आफ्नो तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर स्वदेश फर्किनुअघि राजदूत टेप्लिजले नेपालको राजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई सकारात्मक रुपले अमेरिकाले हेरेको बताउँदै नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थालाई नेपाली जनता र राजनीतिक नेतृत्वले बुद्धिमतापूर्ण तवरले व्यवस्थापन गरेकामा प्रशंसा गर्नुभयो । संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनजस्ता केही महत्वपूर्ण कार्यलाई आफूले नजीकबाट हेर्ने मौका पाएको र त्यसबाट आफू सन्तुष्ट रहेको भनाइ उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । अमेरिका विकासको साझेदार मात्र नभई घनिष्ठ मित्र रहेको बताउँदै अमेरिकी राजदूतले आतंककारी क्रिय
दिल्लीमा मध्यराति १६ नेपाली युवतीको उद्दार
९ साउन, काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीबाट गएराति १६ नेपाली युवतीको उद्दार गरिएको छ । नेपालबाट दिल्ली हुँदै कुवेत र इराक लैजान लाग्दा दिल्ली महिला आयोगले उद्दार गरेको हो । उनीहरुलाई नेपालबाट विभिन्न प्रलोभन देखाएर भारतसम्म पुर्‍याइएको दिल्लीका सामाजिक अभियन्ता अमित मिश्रले जनाएका छन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘आश्चर्यको कुरा छ, नेपाली युवतीलाई यहाँबाट कुवेत र इराक लान लागेको कुरा महिला आयोगले थाहा पायो । तर, ५ सय मिटरको दूरीमा रहेको प्रहरीले केही थाहा पाएन ।’ उनीहरुलाई कुवेत र इराक लाने सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा उद्दार गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । Amit Mishra ✔@Amitjanhit देश की राजधानी दिल्ली से नेपाल की 16 लड़कियों को कुवैत भेजा जा रहा था जिन्हें दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने रेस्क्यू करवाया। आश्चर्य की बात है की इन सब की जा
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पासपोर्टबिनै बैंकक उड्न खोजेपछि….. त्रिभुवन विमानस्थलमा हंगामा उनको लागि मच्चियो भागदौड
काठमाडौं- सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अनौठो तरिकाले शक्ति प्रदर्शन गरे मंगलबार। काठमाडौंबाट बैंककका लागि उड्‍न तयार टीजी ३२०को निर्धारित समयभन्दा १० मिनेट अघिमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका मन्त्री यादवले आफू जसरी पनि जानु पर्ने अडान लिएपछि विमानस्थल र थाइ एयरवेजका सम्बन्धित अधिकृतहरुले पाइलटलाई सम्पर्क गरे। भीभीआइपीलाई ‘अकोमोडेट’ गर्न केही समय उडान ढिलो गर्न सकिने पाइलटले जवाफ दिएपछि बन्द भइसकेको प्लेनको ढोका खुल्‍यो र हटाइ सकेको भर्र्‍याङ प्लेनको नजिक फेरि ल्‍याइयो। तर, पुन: नयाँ समस्‍या आइलाग्‍यो। उपप्रधानमन्त्री यादवसँग पासपोर्ट नै रहेनछ। हतारहतारमा र विशेषाधिकार प्रयोग गरी अर्को रातो पासपोर्ट बन्‍यो। तर चेकिङ काउन्टर बन्द भइसकेकाले उनलाई ‘कम्प्‍युटराइज्ड’ को सट्टामा हस्तलिखित बोर्डिङ पास दिइयो। त्रिभुवन विमानस्थलमा उनलाई पा